Resaky ny mpitsimpona akotry : lasa lavitra ity fihaingoana ambony tsikoko | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : lasa lavitra ity fihaingoana ambony tsikoko
Par Les Nouvelles sur 23/06/2017
Na tsy atao resaka intsony aza ny fahantran’ny vahoaka sy ny fitontongan’ny harem-pirenena noho ny fanaovana tandrametaka amin’ny fanomezana baranahana ny alalana ho an’ny fitrandrahana sy ny fikipiana tsy hijery ny fanaovana izany antsokosoko, dia tsy afaka ho jerem-potsiny ny fampiadanan-tenan’ireo tompom-pahefana tsy te hahalala fitsitsiana volam-panjakana rehefa hanatanteraka ny sitrapo kely mandalo ao an-tsainy.
Tsy hay afenina intsony fa efa manify dia manify ny sisa tavela ao anaty kitapo, hany ka nanira-tena nindram-bola any amin’ny banky tsy miankina any ivelany. Efa kely sisa dia ho kenda matoa any amin’ny làlana tsy mahazatra no ihazakazahana. Mangatsitsiaka angamba ny fifandraisana amin’ireo mpamatsy mahazatra. Tsy hoe akanga tsara soratra akory ilay mpampindrana vaovao ka sodokan’izay. Ny fanenon’ny zana-bola takiny dia efa ampy hampandositra. Fa tampi-dalan-kaleha angamba ka ny hany sisa azo natao dia nandondona any amin’ny mpiandry kendri-tohina. Resaka aleo maty rahampitso indray ity no mitranga. Adino angamba fa ilay rahampitso dia ny zanaka amam-para. Firenena anie ity tantanana ity. Atao sorona mialoha ny taranaka amin’ny fanaovana ny fitafy gony sy fandriany fotsy rahatrizay mba hahafahan’ny tena ho maivamaivana androany.
Lany henatra angamba ary tsy mandraharaha intsony an’izay vavam-bahoaka. Ny mponina mizaka ny fitomboan’ ny fahasahiranana. Ny ankamaron-dry zalahy minisitra mifaninana amin’ny fiderana ny fitaingenana fiara faran’izay matanjaka nivoaka farany ary mitombo isan’andro ny isan’ ireo hodidinina fiara mpisava làlana sy ny mpiambina avy ao afara. Ny parlemantera, na solombava-bahoaka na senatera, izay mizaka soketa avy amin’ny mponina, misafo saoka fotsiny raha mitaky ny anjarany. Anipazany vatomamy ho tsentsefina amin’ny fanondrotana karama raha toa mangidy vava mba ho rarakivy fotsiny fa tsy ho velom-pialonana mahita azy miadankadana anivon’ny fanamboniboniana tena.
Ny fitondrana tsy manana fitsaharana amin’ny fitiavana fisehoana mamirapiratra. Ny zava-bita anefa vasobasoka, ary ny atao takotakonana hanjavozavo. Rainizavona mihitsy ohatra no mitantana ny raharaha fanafinafenana an’ilay gadra malaza Claudine Razaimamonjy. Toy ny fangalapiery lalandava. Rehefa nafindra atsy, nampitaina ary ny ampitso. Voalaza omaly fa napetraka amin’ny trano manokana, anio indray hoe ao amin’ny fonja mihitsy no natanana. Rehefa reraka ny mpanara-maso izay tsy mahita azy vatana akory dia malalaka amin’izay ny làlana ahafahany manjavona tanteraka.